Sharax Yacnii biyo uu nin ku qabeystay baaldi iyo wax la mid ah oo intuu musqul la galay uu ku qabeystay, haweenay inaynan kaga daba qabeysanin wixii kusoo haray, biyo cusub inay qaatado mooyaane. Ninkuna sidoo kale weeyaane, haweenay biyo ay ku qabeysatay aanu kaga daba qabeysanin intay soo reebtay. Siday yeelayaan markaa? Xadiiska isnaadkiisuna waa saxiix, isnaadka ragga weriyey [xadiiska] baa la yiraahaa. Ibhaamkaasi xadiiska wax ma u dhimaayaa?
Author: Zulkizshura Mezijind
Sharax Yacnii biyo uu nin ku qabeystay baaldi iyo wax la mid ah oo intuu musqul la galay uu ku qabeystay, haweenay inaynan kaga daba qabeysanin wixii kusoo haray, biyo cusub inay qaatado mooyaane. Ninkuna sidoo kale weeyaane, haweenay biyo ay ku qabeysatay aanu kaga daba qabeysanin intay soo reebtay. Siday yeelayaan markaa? Xadiiska isnaadkiisuna waa saxiix, isnaadka ragga weriyey [xadiiska] baa la yiraahaa. Ibhaamkaasi xadiiska wax ma u dhimaayaa? Xadiiska ibhaamkaasi waxba u dhimi maayee, haddaan xataa ninkaasi ninkuu yahay aan la garanin kolka mar haddii inuu saxaabi yahay naloo sheegay waxba u dhimi maayee xadiisku sidaas saxiix buu ku noqonayaa; daciif kuma noqonayo.
Illeen saxaabada- ridwaanul Laahi calayhim- kulligood waa wada caadiliin weeyaan oo Allaaba taskiyeeyey  - ridwaanul Laahu calayhim- laakiin hadduu weriye raawi kale ahaan lahaa oo saxaabi aan ahayn xadiisku sidaas daciif buu ku noqon lahaayoo sida fannu musdalaxil xadiis lagu yaqaano qofka mubhamka ah [aan magaciisa la sheegin] iyo qofka majhuulka [aan la garanayn] ahba riwaayadooda lama qaato.
Markaa ninkaasu ninkee buu marka noqonayaa? Waxaa jira laba nin oo asaxaabo ahoo midkoodba arrintaa laga weriyey, oo midkood waxaa la yiraahaa Cabdullahi ibn Sarjis, ka kalena waxaa la yiraahaa AlXakam ibn Camr al Qifaarii, - radiyal Laahu canhum- labadaa midkood inuu yahay ayey u eg tahay. Inuu mid kale yahayna waa iska suuroowdaa, kollaba ibhaamkaas xadiiska la ibhaamiyey waxba xadiisku kuma noqonayo xadiisku saxiix weeyaan.
Marka xukunku wuxuu noqonaayaa [haddii] raggiyo haweenku intay isla galaan musqusha- dabcan labadii isqabta weeyaan- [oo] ay iskula qabeystaan weelkana dhexdooda intay dhigtaan wada dardarsadaan inaynan dhib lahayn.
Kitaabka Buluuqul Maraam – Sheekh Xasan Ibraahim Ciise
Yozshull Haddii ay dani kallifto inaan hadalkii sheekha wax ku kordhino si aan arrin u caddayno, waxaan adeegsanaynaa [ ]. Eray bixinta Ibn Xajar: Rasuulkii Alle- sallal Laahu calayhi wasallam- wuxuu yiri: Marka xukunku wuxuu noqonaayaa [haddii] raggiyo haweenku intay isla galaan musqusha- dabcan labadii isqabta weeyaan- [oo] ay iskula qabeystaan weelkana dhexdooda intay dhigtaan wada dardarsadaan inaynan dhib lahayn. Wuluuq waxaa la yiraahaa waxyaalaha carrabka wax ku cabba, sida bisadda iyo ugaadha iyo eygiyo kuwaasoo kale, ku cabidda ay biyaha iyo wixii la mid ah carrabka ku cabbaan ayaa wuluuq la yiraahaa. Notify me of new comments via email. Buluuqul Maraam Xadiisku markaa wuxuu tusinayaa: Danta koowaad ee aanu ka leenahay casharadan diyaarintoodu waa in dadku fahmaan xadiiska Nebiga- sallal Laahu calayhi wasallam- kuna dhaqmaan. Allaa markaa shay walba masaalixdiisa ku hanuuniyey, oo waa garanayaa shay walbaba waxa jismigiisa ku jira iyo waxa cadowgiisiyo waxa nafcigiisiyo waa yaqaanaa. Xadiiskan riwaayada Abii Daawuudna marka iyadu saxiix weeyaan waxaa saxiix yeelay Shaykh Albaani: Markaa weriyihii daciifka ahaa wuxuu helayaa cid ku raacday wixii uu weriyey oo waa ku xoogaysanayaa.
Buluuqul Maraam ll Sh Sharif Cabdi Nuur